Ọ bụrụ n’ị mepụtara nyocha ma nwee olile anya iji nweta ọnụọgụ na njirimara dị na azịza gị, ị ghọtara otu o siri sie ike ịza ajụjụ ndị ahụ. Nkọwa okwu, usoro na ụtọasụsụ ị jụrụ nwere ike ibute nsonaazụ ga-eduga nyocha gị.
Offọdụ n'ime ihe ndị kasị baa ọgaranya, na-agbanwe agbanwe na-abịa site n'ịjụ ajụjụ ndị a na-emeghe. Gịnị mere bụ ihe atụ zuru oke. Ma azịza ya ya mere bụghị ọnụọgụ, ọnụọgụ abụọ, ma ọ bụ nzaghachi nhọrọ… ya mere ọ na-esiri ike mgbe niile iji nweta ọnụọgụ na njirimara dị mkpa ịchọrọ site n'ịjụ ajụjụ ghere oghe iji duzie mkpebi azụmahịa.
Ngosiputa ihe nke GroupSolver na enyere ndi oru aka ilele ma ru oru n’ime uche gi. A na-ahazi data ma melite ka a na-achịkọta ya, ị nwere ike ihuchalu nsonaazụ n'oge ọ bụla.